Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Top 11 Medical Expenses ဆေးကုသမှု ကုန်ကျစရိတ် အများဆုံး (၁၁) ခု
Top 11 Medical Expenses ဆေးကုသမှု ကုန်ကျစရိတ် အများဆုံး (၁၁) ခု
1. Heart Conditions: $95.6 Billion (၁) နှလုံးရောဂါ
2. Trauma: $74.3 Billion (၂) ထိခိုက်ဒဏ်ရာ
3. Cancer: $72.2 Billion (၃) ကင်ဆာ
4. Mental Disorders: $72.1 Billion (၄) စိတ်ဝေဒနာများ
5. Joint Disorders: $57 Billion (၅) အဆစ်ရောဂါများ
6. COPD and Asthma: $53.7 Billion (၆) အသက်ရှူလမ်းပိတ်ဆို့ရောဂါများ
7. Hypertension: $47.4 Billion (၇) သွေးတိုးရောဂါ
8. Diabetes: $45.9 Billion (၈) ဆီးချို
9. Hyperlipidemia: $38.6 Billion (၉) အဆီများရောဂါ
10. Back Problems: $35 Billion (၁ဝ) ခါးနာရောဂါ
11. Normal Childbirth: $35 Billion (၁၁) ရိုးရိုးသားဖွါးခြင်း
ဒီလေ့လာမှုက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာသာ ဖြစ်ပါတယ်။
1. Heart Conditions: $95.6 Billion (၁) နှလုံးရောဂါ = ဒေါ်လာ ၉၅့၆ ဘီလျန်
အမေရိကန်နိုင်ငံသား ၈ဝ% မှာ နှလုံးနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ရောဂါ တမျိုးမျိုးရှိနေကြတယ်။ တနှစ်မှာ ၈ သိန်၊ ၆ သောင်း သေဆုံးနေကြရပြီး၊ ဈေးအကြီးဆုံးဆေးကုသမှုဖြစ်တယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းပါ။ အစားအသောက်ဆင်ခြင်ပါ။ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ ဆေးလိပ်မသောက်ပါနဲ့။ သွေးတိုး၊ ဆီးချိုတွေပါတွဲနေရင် ဆရာဝန်ညွှန်တာ မြေဝယ်မကျ နားထောင်ပါ။
2. Trauma: $74.3 Billion (၂) ထိခိုက်ဒဏ်ရာ = ဒေါ်လာ ၇၄့၃ ဘီလျန်
အမေရိကန်တွေ တနှစ်မှာ သန်း ၃ဝ-၄ဝ ထိခိုက်ဒဏ်ရာနဲ့ ဆေးရုံလာနေကြရတယ်။ မော်တော်ယာဉ်တိုက်မှုက အများဆုံး ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်သေရတာ ၂ဝဝ၉ တုံးက ၃၃၃ဝ၈ ယောက်ရှိခဲ့တယ်။ ဒါတောင် ကားမှာ လေအိတ် တပ်ထားတာ၊ ခါးပတ်တပ်တာ၊ မူးရင်မမောင်းရ ဥပဒေလုပ်ထားတာ၊ စတာတွေကြောင့် ၁၉၅ဝ နဲ့စာရင် ကျဆင်းလာတာ ဖြစ်တယ်။
3. Cancer: $72.2 Billion (၃) ကင်ဆာ = ဒေါ်လာ ၇၂့၂ ဘီလျန်
အမေရိကန် ၁၁့၇ သန်းမှာ ကင်ဆာ တမျိုးမျိုးရှိကြတယ်။ တနှစ်သေဆုံးရတာ ၅ သိန်း၊ ၆ သောင်းရှိတယ်။ သေဆုံးရတဲ့ ဒုတိယမြောက်အများဆုံး နဲ့ တတိယမြောက် ဈေးအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ၁၉၉၉ ကနေတွက်ရင် ကျလာနေတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူနေမှုပုံစံ၊ အစားအသောက်၊ လေ့ကျင့်ခန်း၊ ဆေးလိပ်မသောက်ခြင်း၊ ဆေးစစ်ခြင်းတွေကြောင့် ကျလာတာ ဖြစ်မယ်။
4. Mental Disorders: $72.1 Billion (၄) စိတ်ဝေဒနာ = ဒေါ်လာ ၇၂့၂ ဘီလျန်
အမေရိကားမှာ စိတ်ဝေဒနာသည်တွေ တိုးလာနေတယ်။ ၁၉၉၆ တုံးက လူနာ ၁၉ သန်းရှိခဲ့ရာကနေ ၂ဝဝ၆ မှာ ၃၆ သန်း အထိရှိလာတယ်။ လူကြီးထဲက ၂၆% မှာ စိတ်ဓါတ်ကျရောဂါ ဖြစ်နေကြတယ်။
5. Joint Disorders: $57 Billion (၅) အဆစ်ရောဂါများ = ဒေါ်လာ ၅၇ ဘီလျန်
ထိခိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့ အရိုး-အဆစ်နာတာ ဥပမာ Osteoarthritis ဖြစ်တာမနည်းပါ။ သန်း ၅ဝ ရှိတယ်။ အသက်ရသူတွေ ပိုဖြစ်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ ကိုယ်အလေးချိန်ချတာ ကောင်းတယ်။
6. COPD and Asthma: $53.7 Billion (၆) အသက်ရှူလမ်း ပိတ်ဆို့ရောဂါများ နှင့် ပန်းနာ = ဒေါ်လာ ၅၃့၇ ဘီလျန်
နာတာရှည် အသက်ရှူလမ်းပိတ်ဆို့ရောဂါတွေထဲမှာ Emphysema (အင်ဖိုက်ဆီးမား) နဲ့ Chronic bronchitis နာတာရှည် လေပြွန်ရောင်ရောဂါတွေပါတယ်။ သူတို့ထဲက ၈၅% ဟာ ဆေးလိပ်သောက်သူတွေ ဖြစ်တယ်။ အမေရိကန် ၁၅% မှာ ပန်းနာရှိတယ်။
7. Hypertension: $47.4 Billion (၇) သွေးတိုးရောဂါ = ဒေါ်လာ ၄၇့၎ ဘီလျန်
အမေရိကန် ၇၄့၅ သန်းကျော်မှာ သွေးတိုးရှိတယ်။ ၂ဝဝ၇-၂ဝဝဂ တုံးကထက် ၅ဝ% နဲ့ ၁၉၈၈-ေ၉၉၄ ကထက် ၂၇% ကျဆင်းလာတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းတာ၊ ဆား လျှော့စားတာ၊ အရက် လျှော့သောက်တာ၊ အသီးအနှံ-အသီးအရွက် စားတာတွေကြောင့် ဖြစ်မယ်။
8. Diabetes: $45.9 Billion (၈) ဆီးချို = ဒေါ်လာ ၄၅့၉ ဘီလျန်
အမေရိကန် ၂၆ သန်းနီးပါ။မှာ ဆီးချိုရှိကြတယ်။ ၂၇% က အသက် ၆၅ နှစ်ကျော်ပြီ။ ဆီးချိုရှိနေသူတွေ နှလုံးရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ မျက်စိကွယ်တာ၊ ခြေ-လက်ဖြတ်ရတာတွေ ဆက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
9. Hyperlipidemia: $38.6 Billion (၉) အဆီများရောဂါ = ဒေါ်လာ ၃၈့၆ ဘီလျန်
အဆီတွေဖြစ်တဲ့ Cholesterol နဲ့ Triglycerides တွေ များတာမကောင်းပါ။ အမေရိကန် ၁ဝ၂ သန်းမှာ (ကိုလက်စထော) များနေကြတယ်။ သွေးလွှတ်ကြောတွေကို ကျဉ်းစေတယ်။ နှလုံးရောဂါ နဲ့ (စထုပ်ခ်) ဖြစ်လာစေမယ်။
10. Back Problems: $35 Billion (၁ဝ) ခါးနာရောဂါ = ဒေါ်လာ ၃၅ ဘီလျန်
လူတိုင်းလိုလို တသက်မှာ အနည်းဆုံးတခါ ခါးနာဘူးကြတယ်။ အသက် ၃ဝ-၅ဝ ကြားအဖြစ်များတယ်။ တချို့က ခိုက်မိလို့ဖြစ်ရတယ်။ တချို့က ဇရာသဘောကြောင့် ဖြစ်တယ်။
11. Normal Childbirth: $35 Billion (၁၁) ရိုးရိုးသားဖွါးခြင်း = ဒေါ်လာ ၃၅ ဘီလျန်
အမေရိကားမှာ ဆေးရုံတက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းထဲက နံပါတ် (၁) ဟာ ကလေးမီးဖွါးဘို့ဖြစ်တယ်။ တနှစ်မှာ ကလေးပေါင်း ၄့၁ သန်း မွေးနေတယ်။ ရိုးရိုးကလေးမွေးဘို့ ဒေါ်လာ ၇၆ဝဝ ကုန်တယ်။ မလိုအပ်ဘဲ ခွဲမွေးနေကြလို့ အပို ၂့၅ ဘီလျန် ကုန်နေတယ်လို့ ခန့်မှန်းတယ်။